Uxanduva kwezentlalo - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Ishishini elinzima laseYizheng yingcali yezixhobo zemveliso yezichumiso kunye nezixhobo zemveliso yezichumiso. Naphi na apho ikhoyo, inkampani yenza "ukuhlonipha amaxabiso entlalo kunye namasiko" umthetho wayo wokuqala.
Ngelixa siqhuba ishishini lehlabathi kwaye silandela ukukhula kwenzuzo, yizheng uhlala ebeka ukhuselo lokusingqongileyo kwindawo yokuqala kwaye basebenze kunye kuphuhliso oluzinzileyo loqoqosho lwehlabathi.
Ngoluvo olomeleleyo loxanduva kwezentlalo, ishishini elinzima laseYizheng lithatha ububele njengenye injongo yeshishini. Izenzo zokunikela ngezikolo kunye nokunceda amahlwempu konke kubalisa ibali likaYizheng.